Soo ogow sida loo doorto fadhiga ugufiican qolkaaga fadhiga | Bezzia
U dooro fadhigaaga fadhiga aagga qolka fadhiga
Susana Garcia | 29/03/2021 20:00 | Qurxinta, Dharbaaxo
El fadhiga waa qayb aad muhiim ugu ah nolosheena, maadaama ay tahay meel lagu raaxeysto. Waa goobta aan ku nasano marka aan guriga ku soo noqonno waana sababtaas sababta ay u tahay inay udub dhexaad u noqoto qurxinta. Doorashada fadhiga aagga qolka fadhiga waa hawl dhib badan maxaa yeelay waa inaan si wanaagsan u doorannaa qaabka, dharka ama midabka, iyo sidoo kale cabbirka iyo raaxada.
Waan arki doonaa fikrado kala duwan markii lagu qurxinayo qolka fadhiga oo leh kursi weyn. Qalabkani waa kan ugu muhiimsan qolka fadhiga, aaggiisa ugu muhiimsan iyo waxa ugu horreeya ee soo jiita dareenka, markaa waa inaan si wanaagsan u doorannaa. Waxaa jira noocyo kala duwan oo salootooyin ah waana taas sababta aan u haysanno waxyaabo badan oo aan kala dooran karno.
1 Fadhiga maqaarka
2 Fadhiga guridda
3 Chaise longue fadhiga
4 Fadhiga midabka
5 Soofyada qaybsan
6 Codadka dhexdhexaadka ah ee qolka fadhiga
ka fadhiga maqaarka waa jajab waqti dheer soconaya haddii aan u daryeelno sida ay mudan yihiin. Way fududahay in la nadiifiyo waxayna socdaan sanado iyo sannado. Xaaladdan oo kale, soo iibsiga sofaas noocan oo kale ah waa maalgashi weyn. Way ka qaalisan yihiin laakiin waxay aad uga sii dheer yihiin dharka dharka. Taasi waa sababta kiiskan ay uga fiicantahay in la doorto gabal leh qaab caadi ah oo fudud oo aan ka bixin qaabka. Xaaladdan oo kale waxaan ku aragnaa midabbada midabbada leh laakiin sidoo kale waxaa jira maqaarka midabada ceeriin ama madow. Waxay noogu muuqataa gabal xarrago leh oo tayo leh.
Habka guridda waxay u noqon kartaa xulasho weyn qolkeena fadhiga. Haddii aad ku dartay alaab guri oo kale oo qaraami ah waxaad ku dari kartaa fadhiga salootada. Kuwani badanaa waxaa laga sameeyaa maqaar duug ah iyo maqaar waana kuwo waara. Waxay leeyihiin dabeecad badan inkasta oo ay tahay inaad kudarsato barkimooyin qaar si aad u abuurto isbarbardhig iyo taabasho jilicsan. Haddii barkimaduhu ay leeyihiin taabasho casri ah, waxaan awoodi doonnaa inaan abuurno farqi u gaar ah si aan u cusbooneysiino qaabka fadhiga.
Chaise longue fadhiga
Mid ka mid ah Soofyada ugu raaxada badan ee aad iibsan karto waa midka leh kuraasta dheer. Noocyada cufan ee noocan oo kale ah ayaa qumman haddii aan boos ku leenahay qolka fadhiga, maadaama ay noo oggolaaneyso inaan si buuxda u seexanno. Mid ka mid ah xulashooyinka ugufiican haddii aad jeceshahay inaad waqti badan kuhesho fadhiga fadhiga waa midka xiisaha leh. Ku iibso fadhiga hooska dhexdhexaad ah waxaadna ku raaxeysan doontaa qaybtaan sannadaha soo socda. Xaaladdan oo kale waxay doorteen midab cad, in kasta oo midabbo badan oo noocyo badan leh sida cawl badanaa la doorto.
Una fikrad geesinimo leh ayaa ah in la doorto fadhiga sawaxanka xiisaha leh ama qurux badan oo soo jiita dareenka. Shaki la'aan waa xulasho khatar badan maxaa yeelay waa inaan isku darnaa midabka fadhiga iyo qurxinta inteeda kale. Waad isku dari kartaa barkimooyinka si aad uga dhigto kuwo is-khilaafsan oo isku dara midabyo kala duwan hab xiiso leh oo asal ah. Midkani, tusaale ahaan, wuxuu leeyahay huruud daran oo soo jiita dareenka isla markaana ka dhigaysa fadhiga sariirta qaybta ugu muhiimsan ee qolka fadhiga.
Haddii aad rabto a fikrad taasi waa mid aad u badan maxaa yeelay waxaad dooneysaa inaad wax ka beddesho booska aad jeceshahay, ka dib waxaan kuu soo jeedinaynaa fadhiga weyn ee qaabdhismeedka. Noocyada noocan oo kale ah waxay ka kooban yihiin jajabyo naqshad aad u fudud, oo keliya leh khadad aasaasi ah. Badanaa waxaa lagu iibiyaa tones aasaasiga ah sidoo kale si ay si fudud isugu daraan. Qaar waxay leeyihiin dhabarka qaarna ma lahan, sidaa darteed waa la abuuri karaa xargaha gacmaha ama sofas kala duwan. Waa fikrad xiiso leh oo aad u qaas u ah qol kasta oo lagu noolaado.
Codadka dhexdhexaadka ah ee qolka fadhiga
Mid ka mid ah fikradaha ugu fiican ee loogu talagalay nooc kasta oo ka mid ah qolka fadhiga ayaa dooranaya fadhiga tones-ka aasaasiga ah. Fikradani had iyo jeer way shaqeysaa, maadaama ay tahay gabal la socon doona wax walba. Midabka cawlku aad buu caan u yahay hadda waana sahlan tahay in la isu geeyo, iyo sidoo kale inuu yahay midab aan isticmaalkiisu aad u muuqan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » U dooro fadhigaaga fadhiga aagga qolka fadhiga
5 mowduuc oo lamaanayaashu aysan waligood ka wada hadlin
Noocyo ku habboon guga oo ku dhiirrigelin kara